Horoscope-ka loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka - Humor | Abuurista khadka tooska ah
Horoscope ee Naqshadeeyayaasha Sawirka - Kaftanka
Fran Marin | | Design Graphic, Dhiirrigelinta
Kaftankayaga kale ee naqshadeeyayaasha garaafka ayaa abuuray taxane aad u qurux badan oo sawiro ah oo isku dayaya inay si fiican u muujiyaan noocyada naqshadeeyayaasha jira ee u qaadanaya tixraac ahaan wax quraafaad iyo qadiimi ah sida isugeyn cimrigaaga oo dhan. Laga soo bilaabo astaamaha lala xiriiriyay calaamadaha burji, waxay qorsheeyeen wakiillo xiiso leh oo naqshadeeye ah, taas oo ugu yaraan, kiiskeyga, astaanta la fuliyay.
Si loo qeexo shakhsiyadda qof kasta oo ka mid ah jilayaasha, su'aal ah mid fudud (isla markaana isla markaa dhib badan) aaggeenna waxaa looga jawaabey sida: Immisa naqshadeeye ayey qaadataa si loogu sameeyo isbeddelada lagama maarmaanka u ah naqshadeynta?
Aries: Kaliya hal, laakiin faylal badan ayaa loo baahan yahay.
Taurus: Midna, Naqshadayaasha Taurus ma jecla inay wax beddelaan.
Gemini: Laba, laakiin waxay qaadan doontaa dhamaadka usbuuca oo dhan, markay dhammeeyaan nadiifinta xabbadooda, si looga hadlo aragtida midabka iyo semiotics, waxay diyaar u yihiin inay isbeddelada sameeyaan.
Kansarka: Kaliya hal, laakiin waa inaad seddex sano ku qaadataa daaweynta si aad ula qabsato habka.
Leo: Isbeddel ma sameeyo, naqshaddu isagay u beddelaysaa.
Virgo: Mid shid kumbuyuutarka, mid kale si loo sawiro, mid kale si loo go'aansado waxa fikradda ugu fiican ay tahay, toban in la sameeyo boqolaal naqshadood halka midna la sameeyo midka la tilmaamay.
Miisaanka: Si sax ah looma garanayo, waxay kuxirantahay.
Scorpio: Kalsooni darro, kama jawaabo.
Aquarium: Boqollaal naqshadeeyayaasha aquarium-ka ayaa u muuqan doona kuwo u tartamaya sidii ay u arki lahaayeen cidda noqon doonta midka keliya ee sameeya naqshadda ugu fiican adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Horoscope ee Naqshadeeyayaasha Sawirka - Kaftanka
Robert Juarez dijo
Aad u fiican !!!
Ku jawaab Roberto Juarez
Cashar barasho: Sidee Loogu Kharijiyaa Web Web ah Adobe Photoshop
15 sawir oo muujinaya runta ka dambeysa sawir